ओनसरी घर्ती र नारी पृथ्वी ? - Enepalese.com
ओनसरी घर्ती र नारी पृथ्वी ?
इनेप्लिज २०७२ असोज २९ गते २२:४३ मा प्रकाशित
नारी एक अभिभावक पनि हुन् l नारीको मुल्यांकन असिमित छ र उच्च छ । नारी प्रति देखाउनु पर्ने सद्भाव र श्रदाको खडेरी लागेको छ । नारीलाई केवल वस्तुसंग तुलना गर्न गर्ने सोच परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाली जनताको मुक्तिको लागि भनि गरिएको जनयुद्धमा घर्तिले गरेको समर्पण र त्यागले उनि शिखरमा पुगिन l